Maleeshiyaad katirsan Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Af Urur - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMaleeshiyaad katirsan Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Af Urur
June 8, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Dagaalyahano Al-Shabaab ah oo maraya Buuraha Galgala. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maleeshiyaad katirsan Al-Shabaab ayaa maanta oo Sabti ah la wareegay deegaanka Af Urur oo kuyaala Buuraha Galgala, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu.
Maleeshiyada ayaa la wareegtay deegaankaas kadib markii ciidamada Puntland ay ka baxeen, sida ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Masuuliyiinta Puntland kama aysan hadlin qabsashada Af Urur.
Labo sanno kahor maanta oo kale 8-dii June 2017, Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada Puntland ku lahaayeen deegaanka Af Urur, waxayna ku dileen ku dhawaad 35 askari.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo weli haysata deegaanka Af Urur iyo masuuliyiinta Puntland oo aan ka hadlin
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid oo loo yaqaan Juxa ayaa maanta oo Talaado tagay magaalo xeebeedka Eyl ee gobolka Nugaal, taas oo ka dhigaysa masuulkii ugu sareeyay oo dowladda Soomaaliya katirsan oo [...]